Lionel Messi oo la Filayo inuu kusoo Bilowdo Furitaanka UCL – GEELLE MAG
Lionel Messi oo la Filayo inuu kusoo Bilowdo Furitaanka UCL
Cali Axmed Posted On September 17, 2019
Tababaraha kooxda Barcelona Ernesto Valverde ayaa sheegay in Lionel Messi uu soo laaban karo kulanka ay wajahayaan caawa kooxda Borussia Dortmund furitaanka Champions League-ka.
Messi, oo dhaawac kubka ah ku seegay bilowga xilli ciyaareedkan, ayaa lagu soo daray kooxda Barcelona inkasta oo aan wali la caddayn in uu ciyaari doono iyo in kale.
Tababare Valverde waxa uu sheegay in Barcelona ay raadineyso in ay wixii dhacay ka dib guuldaradii semi-finalka tartankan ka soo gaartay Liverpool xilli ciyaareedkii hore ay doonayaan in ay iska iloowaan.
Tababaraha kooxda Barcelona Ernesto Valverde ayaa sheegay in Lionel Messi uu ku soo laaban karo kulanka ay la ciyaarayaan Borussia Dortmund, iyadoo kooxda reer Catalan ay weerar cusub ku qaadeyso hanashada Champions League marka ay Jarmalka ku ciyaarayaan caawa..
Kabtanka Kooxda Barcelona Messi, oo dhaawac kubka ah ku seegay kulamadii bilowgii xilli ciyaareedkan ay kooxdiisa ciyaartay, ayaa lagu soo daray kooxda Barcelona ee ciyaari doonta furitaanka Champions League caawa.
“Waxaan go’aan ka gaari doonaa xili dambe xaaladiisa kusoo bilaabashada. Isbuucii la soo dhaafay ma aanan hubin in uu ciyaari karo, laakiin waxa uu tababar qaatay labo ama seddex jeer, wuxuuna sameeyay aragti fiican. Waan arki doonaa ”ayuu yiri Valverde oo ka hadlayay shirkiisa jaraa’id ee ka horeeyay kulanka caawa.
Tababaraha Barcelona ayaa diiday in uu cadeeyo 16 jirka Ansu Fati, oo noqday ciyaaryahanka ugu da’da yar ee gool u dhaliya Barcelona horraantii bishaan in uu noqdo kii ugu da’da yaraa ee abid ka soo muuqda Champions League caawa.
“Hadii uu ciyaaro, markaa ma noqon doonto rikoorkaan darteed” ayuu yiri macalinka.
Valverde wuxuu sheegay in kooxdiisu ay raadineyso in ay wixii dhacay gadaal u eegin ka dib guuldarrdii semi-finalka UCL kasoo gaartay Liverpool xilli ciyaareedkii hore.
“Haddii aad hal maalin xun leedahay, waa lagaa saari karaa tartanka. Waxaa na laga badiyay kaliya hal kulan xilli ciyaareedkii hore, laakiin wuxuu ahaa kulan muhiim ah,” ayuu yiri, isagoo intaas ku daray in Barcelona ay dooneyso in ay ka sii gudubto sannadkan marka loo fiiriyo booskoodii labadii xilli ee la soo dhaafay.
Marc Ter Stegen, Goolhayaha reer Jarmal kaasoo ka soo hoos ciyaaray macallinka haatan kooxda Dortmund Lucien Favre waqtigiisii Borussia Moenchengladbach horaantii mustaqbalkiisa, ayaa ka digay in Dortmund ay tijaabo adag u tahay kooxdiisa.
“Lucien Favre waa mid ka mid ah tababarayaasha ugu fiican ee aan abid lasoo shaqeeyay, waxaana uu ka fikiri doonaa qaab uu nagu wax yeeleeyo,” ayuu yiri goolhayaha Jarmalka.
”Had iyo jeer way adag tahay in halkaan la yimaado, waxaana had iyo jeer ku dhibtoon jiray halkaan waqtigii aan ku sugnaa Gladbach, laakiin waxaan isku dayi doonaa in aan badino oo aan bilow fiican ku bilowno tartanka.” ayuu yiri Stegen.
“Waa garoon cajiib ah, taageerayaashuna waligood waa waalan yihiin, laakiin waxaan isku dayi doonnaa in aanay taasi saameyn nagu yeelan.” ayuu yiri goolhayaha Jarmalka.
Barcelona ayaa laga dhaliyay lix gool afar kulan oo ay ciyaareen xilli ciyaareedkan, laakiin weli guul kama aysan gaarin meel ka baxsan garoonkooda.
“Waxaan hada leenahay hadafyo badan, waa in aan aqbalnaa taas oo isku daynaa in aan horumar sameyno,Khaladaadka aan sameyneynaa way fududahay in la saxo.”ayuu yiri Ter Stegen.
Dowladda Ruushka oo Soomaaliya ka Taageereysa Waxyaabo Badan